२०७७ जेठ ६ गते ९:५५
हालको कोरोना विश्वमहामारीबाट आफू र आफ्नालाई जोगाउन तपाईँलाई एन९५ माष्कभन्दा पनि साबुन पानी सहितको सामान्य ज्ञान वा चेतनाको खाँचो रहेको छ ।
सफा नगरिएको हातले मुख छुने, माष्कलाई तल सारेर खाना खाने तथा अघिल्लो भागमा च्यापेर माष्कलाई यताउता मिलाउने लगायतको कार्य गर्ने तपाईँको पनि बानी छ भने तपाईँ सायद संक्रमित भैसक्नु भएको छ ।
संक्रमितमध्ये अधिकांशमा यस भाइरसले लक्षण नदेखाउन सक्छ । कल्पना गरौं कि यस भाइरसलाई १०० जना ब्यक्तिहरुको नाकमा छर्किइएको छ ।
करिब ६० जनामा भाइरसको लक्षण कहिल्यै देखा नपर्न सक्छ भने बाँकी ४० मध्येका २० जना अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने गरी सिकिस्तरुपमा थलो पर्दछन् । भने यसरी भर्ना भएका २० मध्येको एक जनाको मृत्यु हुनसक्छ । अस्पतालले ‘केश फेटालिटी रेट’ (घटना मृत्यु दर) लाई पाँच जनामा एक अर्थात पाँच प्रतिशत भनेर जानकारी दिन्छ ।
के नबिर्सनुस् भने भाइरस छरिएका १०० मध्ये २० जनामात्र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न अस्पताल पुगका छन् । यहाँ संक्रमितहरुको मृत्युको बास्तविक जोखिम अर्थात ‘इन्फेक्सन फेटालिटी रेट’ १०० जनामा एकमात्र हुन्छ । ‘एसिम्टोमेटिक इन्फेक्स रेट’ अर्थात लक्षण नदेखिएको ब्यक्तिहरुमा संक्रमणको मात्रा बारे कसैलाई थाहा नहुने हुनाले यसबारेको तथ्यांक पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ । तर हालको कोरोना संक्रमणको लागि सो तत्यांक आँकलन गरिएको छ, जुन गणितज्ञहरुका अनुसार ०.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता वा स्वास्थ्यकर्मी भएको कारण के तपाईँ अन्य सामान्य मानिसको तुलनामा भाइरस संक्रमण वा जटिल समस्याको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ ? सायद हुुनुहुन्न ।
३. स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता वा स्वास्थ्यकर्मी भएको कारण के तपाईँ अन्य सामान्य मानिसको तुलनामा भाइरस संक्रमण वा जटिल समस्याको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ ? सायद हुुनुहुन्न ।
फोन गर्दा वा उठाउँदा, साथीहरुसँग बोल्दा वा ओपिडीबाट बाहिर निष्कँदा लगाइरहेको माष्कलाई तल झार्ने काम नगर्नुहोस् । माष्कको प्रयोग गर्दा शास फेर्न कठिनाइ भयो भन्ने काम पनि नगर्नुहोस् (गाह्रो हुन्छ तर सम्झौता गर्नुपर्छ) ।
५. सबैभन्दा पहिला कुन अवस्थामा कस्तो माष्कको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुहोस् ।
अस्पतालको ओपिडीमा कार्यरत रहँदा वा बिरामीहरुको निगरानीमा वरपर टहल्दा सर्जिकल माष्कको प्रयोग गर्नुहोस् । त्यसैगरी, बिरामीहरुबाट ¥याल वा सिँगानको छिटा निष्कने उपचारको विधी संचालनमा संलग्न हुँदा वा नजिकै रहँदा एन९५ माष्क लगाउनुहोस् र आफ्नो शरिरबाट निष्कने छिटाको संचारलाई रोक्न समुदायमा भने सामान्य कपडाको माष्कको प्रयोग नै पर्याप्त हुन्छ । आफूसँग भएको श्रोतलाई प्रभावकारीरुपमा बुद्धिमताका साथ उपयोग गर्नुहोस् । अझ संकटको अवस्थामा तपाईँलाई यिनीहरुको आवश्यकता आवश्यक हुनसक्छ ।
तपाईँले पनि सहकर्मीहरुको अवस्थामाथि ध्यान दिइ आवश्यक प्रतिक्रिया दिनु होस् । उनीहरु संक्रमित नहुनु भनेको तपाईँ पनि सुरक्षित रहनु हो ।
१४. कोरोना आँखाबाट शरिरभित्र छिर्ने हुनाले अस्पताल पुग्नासाथ आँखामा भिजर (आँखा छोप्ने यन्त्र) तथा फेश सिल्ड (अनुहार ढाक्ने यन्त्र) को प्रयोग गर्नुहोस् । आफ्ना
सहकर्मीहरुसँग कुरा गर्दा पनि यि यन्त्रहरु ननिकाल्नुहोस् ।
१६. बिरामी, आफन्त तथा कुरुवाहरुलाई माष्कको प्रयोग गर्न सधै कर गर्नुहोस् ।
(भारत केरलास्थित जिमकेयर हस्पिकटलका संक्रामकरोग विशेषज्ञ डा. राकेश टि पराकदाभाथुले तयार पाएर चिकित्सा समुदायमा सर्कुलर गरिएको सामग्रको अनुवाद)